Macallimiinta Kenya oo ka cabanaya shaqo la’aan baahsan.(Warbixin) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Macallimiinta Kenya oo ka cabanaya shaqo la’aan baahsan.(Warbixin)
Last updated Jul 3, 2019 401 0
Baaritaan cusub oo la sameeyay ayaa lagu ogaaday in boqollaal kun oo katirsan macallimiinta wadanka Kenya ay heysato shaqo la’aan baahsan, iyadoona ay sii kordheyso xaaladda adag ee ay ku noolyihiin Macallimiintaas.
Sida ay sheegeyso diraasadan oo uu soo saaray urur ay ku mideysanyihiin macallimiinta Kenya, tirada guud ee macallimiinta shaqo la’aanta ah waxay gaarayaan 328, 324 macallin, kuwaas oo isuga jira rag iyo dumar.
Macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada hoose iyo dhexe oo ay wax ka bartaan ardey lagu qiyaasay dhowr milyan oo ruux, ayaa tiradooda laga dhigay 38 kun oo macallin, dugsiyada sarena waxaa bariyaal ka ah qiyaastii 58 kun oo macallin, waana tiro aad u yar marka loo eego sidii hore.
Waxaa sidoo kale macallimiintu sheegayaan in wasaaradda Waxbarashada aaney kasoo jawaabin codsiyo ay u geystaan macallimiin doonaya in shaqo laga siiyo iskuullada dalka, taasina waxay ciriiri gelisay nolosha macallimiin doonayay iney noloshooda ku maareeyaan dhaqaalaha ay ka helaan iskuullada.
Afartii bilood ee lasoo dhaafay macallimiin tiradooda lagu qiyaasay kudhawaad 20 kun oo ruux ayaa wasaaradda Waxbarashada u gudbiyay rabitaankooda la xiriira iney macallimiin noqdaan, welina ma helin wax jawaab ah.
Arinta ugu weyn ee loo sababeynayo shaqo la’aanta macallimiinta ayaa ah musuq maasuqa ragaadiyay hay’ad weliba oo kamid ah dowladda Kenya, waxaana musuqa ka jiraa halka ugu sarreysa dowladda ee Uhuru Kenyatta illaa askariga ugu hooseeya.
Siyaasiyiinta Kenyaatiga ayaa dowladooda ku eedeynaya iney ka gaabisay adeegyada muhiimka u ah ee bulshada, sida waxbarashada iyo caafimaadka, taas bedelkeedana ay dhaqaale adag ku bixiso arimaha milliteriga.
Kenya, waxaa kumanaan askari ka jooga koonfurta Soomaaliya, halkaas oo sanadkii 2011-dii ay kusoo duushey, iyadoo ku andacooneysa iney ilaalineyso amniga wadankeeda, balse sida ay ku waramayaan Aqoonyahannada, Kenya kama dhaafin dagaalka Soomaaliya waxaan ka ahayn burbur iyo amni xumo ballaaran.
Inkastoo dagaalku u muuqanayo mid sii dheeraanaya, Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaabna ay ku hanjabtay iney sii wadi doonto howlgallada ka dhanka ah Kenya iyo dadkeeda, hadana maamulka Uhuru Kenyata ma hayo siyaasad uu ku maareeyo waxyaabaha ka dhashey dagaalka, taas oo sii kordhin karta culeeska dhaqaale iyo midka amni ee ay dareemayaan shacabka Kenya.